Salaamanews » Dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay nin isqarxin rabay oo ka tirsan Al-shabaab
Home » Warar Dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay nin isqarxin rabay oo ka tirsan Al-shabaab Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 5th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Howlgallo ballaaran oo laga billaabay Garoowe kadib dil xalay loo geystay sarkaal sare oo ka tirsanaa baliiska PuntlandYeman oo qabatay hogaamiye ka barbar dagaallami jiray Al-shbaab Somaliland: Kooxo hubeysan oo weeraray saldhiga magaalada CeynabaUganda oo ku raad joogta rag ku xiran al-ShabaabMaxkamadda Burco oo xukunno adag ku riday rag la soo eedeeyay
(Salaamanews)-Wararka ka imaanayo gobolka Jubada hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen nin ka tirsan Al-shabaab oo fulin rabay weerar ismiidaamin ah uu la beegsanayay Saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Kismaayo iyo kuwa Kenya ee ka qeyb qaadnaya howlgalka AMISOM.
Sida dad goob joogayaal ah ay SN u sheegeen waxaa qabashada ninkani isqarxin rabay ay ka dambeysay baaritaan ciidamada dowladda ay habeenkii xalay ahaa ka sameeyeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose.
Saraakiil u hadlay maamulka Kismaayo ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay jiraan rag kale oo la tuhunsanyahay oo iyana loo qabtay falalkii amni xumo ee maalmihii dambe ka dhacayay magaala xeebeedka Kismaayo.
Afhayeenka ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobollada Jubooyinka C/naasir Seeraar Maax, ayaa sheegay in qabashada ninkan ay fududeeyeen xubno horey uga soo goostay kooxda la wiiqay ee xarakada Al-shabaab.
“Waanu hubinay ninkani wuxuu doonayay inuu fuliyo weerar ismiidaamin ah, waxaana qabashadiisa noo fududeeyay rag horey uga soo goostay Al-shabaab oo safkeenna ku soo biiray” sidaasi ayuu warbaahinta u sheegay Mr Seeraar.
Qabashada ninkani ka tirsan fallaagada Al-shabaab ayaa ku soo beegmeysa iyadoo howlgallo baaritaanno gur guri ah ay ciidamada dowladda maalmihii dambe ka wadeen magaala xeebeedka Kismaayo, waxaan magaalada dhawaan ka dhaqan galay bandow habeenkii ah.
Tags: warar « Qoraalkii HoreMadaafiic khasaare geystay oo lala beegsaday madaxtooyada Soomaaliya	Qoraalka Xiga »UN launches $1.3 billion appeal for humanitarian needs in Somalia	Halkan Hoose ku Jawaab